“Tsy an-tery fa an-tsitrapo”, hoy izy…: ny minisitry ny Fahasalamana no natao vaksiny voalohany | NewsMada
Par Taratra sur 11/05/2021
Nisantatra ny fanaovam-bakisiny miaro amin’ny Coronavirus, omaly, ny minisitry ny Fahasalamana, ny Pr. Rakotovao Hanitrala Jean Louis sy ireo mpiara-miasa aminy. Mbola nanatitrantitra izy fa an-tsitrapo ny fanaovana ny vaksiny.
Nisantatra ny fanaovam-baksiny miaro amin’ny Covid-19, ny Covishield, omaly teny amin’ny HJRA Anosy, ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis. “Manampy ny fitaovam-piarovana efa nampiasaiko ny vaksiny satria efa mandray CVO+ tsy tapaka hatramin’izay aho”, hoy ny nambarany. Niroso amin’ny fandraisana ny vaksiny koa ny mpikambana amin’ny fitantanana ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. 250 000 ny fatra ho an’ny andiany voalohany ka laharam-pahamehana ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny mpitandro filaminana ary ny vondron’olona marefo (diabetika, manana tosidra ambony, zokiolona mihoatra ny 70 taona).
“17 ka hatramin’ny 20% amin’ny mponina eto Madagasikara ny hahazo vaksiny raha vita ireo vondron’olona voalaza ireo”, hoy ny solontenan’ny Sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS), i Charlotte Ndiaye. Firenena 45 aty Afrika ny efa nisitraka ny anjarany amin’ny firenena afrikanina 92 nanaraka ny fandaharanasa Covax. Fatra 13 800 000 ny efa voazara hatramin’izao ary ny vaksiny Covishield no betsaka indrindra. Anisan’ny nandray anjara nanohana hahazoan’ny firenena afrikanina ny vaksiny ny fanjakana amerikanina, araka ny voalazan’ny masoivohony miasa eto amintsika, omaly.
Nitohy teny amin’ny foiben’ny Andia Malagasy miady amin’ny diabeta (Amadia) Faravohitra ny fanaovam-baksiny ho an’ny olona manana toe-tena diabetika. Valo ka hatramin’ny 12 herinandro ny tokony hatao ny fatra faharoa amin’ny vaksiny hampahomby azy.
Ireo nisitraka voalohany ny vaksiny Covishield
Dr Rakotomalala Jean Claude, mpandrindra ny ONG ASOS
Izahay eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena no anisan’ny nivoy fa tsara ny handraisana ny vaksiny fiarovana maharitra ny Covid-19 eto amintsika. Ohatra ny aretina mifindra rehetra izay voaaro amin’ny vaksiny ny Covid-19. Azo itahirizana tsara ny vaksiny ny fitaovana misy eto amintsika satria eo anelanelan’ny 3°C sy 6°C ny hatsiaka takina. Ho an’ny fisehoana tranga hafa aorian’ny vaksiny, olona iray amin’ny 250 000 ny mety hisehoany ka tsy tokony hatahotra ny vahoaka.
Andriambonimihanta Antoine, tomponandraikitry ny tetikasa “Ampiasao ny talenta”-Fiangonana loterana
55 taona aho ary tsy mbola tafiditra amin’ny zokiolona natokana ho laharam-pahamehana nefa kosa amin’ny toe-tenako manana tosidra ambony, mahatsapa fa marefo. Tonga nisoratra anarana teny amin’ny CSB Ambohimanarina aho fa tsy neken’izy ireo ny herinandro lasa teo. Nandeha teny amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana vao maraina omaly ka voaray fa atao ho anisan’ireo hisitraka ny vaksiny omaly ihany. Tsy mbola tratran’ny valanaretina Covid-19 aho ary isaorana lehibe ny Tompo izany fa kosa ilaina ihany ny manamafy ny fiarovana amin’ny vaksiny.
Nangonin’i Vonjy A.